အဆိုပါထန္တ5 ဂိမ်းများစိတ်ကူးဂိမ်းအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူလာ. ၎င်းတို့ဟာယခင်ဖလက်ရှမီးဂိမ်းမျိုးဆက်ထက်ပိုအဆင့်မြင့်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပလက်ဖောင်းနဲ့ကိုက်ညီမှုအပြည့်နဲ့လာပါတယ်။၎င်းတို့ဟာဘရောက်ဇာထဲတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခံစားနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ရှိသမျှတို့သည်အမဲလိုက်ဂိမ်းလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ မသာကြောင်း,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သင်ရှိသည်သမျှကိုကမ်ဘာပျေါတှငျသို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်များအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့သောအကြီးအကျယ်စုဆောင်းမှုရှိသည်. ကျနော်တို့ရှိသည်စေခြင်းငှါအလိုဆန္ဒအမျိုးမျိုးတို့ကိုများအတွက်မျှတသောချိန်းတွေ့ဂိမ်းများနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောချိန်းတွေ့ကြ.
တွေ့ဆုံခြင်း၊ကစားခြင်းဂိမ်းများသည်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်ချိန်းတွေ့ချိန်းတွေ့မှုအများဆုံးအစုအဝေးဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏စိတ်ကူးယဉ်များအတွက်လိုအပ်သမျှရှိသည်. ပထမဦးဆုံး,ကျနော်တို့ယောက်ျားတွေအဘို့ဖြောင့်ဂိမ်းများရှိသည်များ,သင်သည်တစုံတခုကိုလုပျနိုငျရှိရာကမ္ဘာအတွက်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးသမီးအမျိုးမျိုးနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောချိန်းတွေ့နှင့်လိင်ဘဝတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည့်အတွက်.
ကျွန်မတို့မှာတွေ့မယ်၊အလွတ်ကျက်မယ်ဂိမ်းတွေ၊တကယ့်ယောက်ျားကကောင်းကောင်းခိုအောင်းနေချင်တဲ့တရားဝင်မိန်းကလေးတွေကိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်မယ့်ဂိမ်းတွေရှိပါတယ်။ သင်ကယင်းသွေးဆောင်ဖြားယောင်းပြီးနောက်,သင်ချင်တယ်ဆိုလမ်းအတွက်သူမ၏သွားနိုင်ပါတယ်. တစ်ချို့ဂိမ်းတွေကဘောင်ခတ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တောင်ပါ။ဒါကသင်တွေ့ဖူးတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုရပ်မသွားဘဲအော်ရယ်၊ငေါက်ငမ်းနေတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ,သင်သည်ဤဂိမ်းများတွင်သင်အကြိုက်ဆုံးစိတ်ကူးယဉ်အချို့ကိုစူးစမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ဤမျှလောက်များစွာသောလိင်တူချစ်သူချိန်းတွေ့ဂိမ်းများရှိသည်. ကျွန်မတို့ရဲ့ကွျန်တော်တို့အသိုင်းအဝိုင်းကသူတို့ကိုအရမ်းတန်ဖိုးထားတယ်။ သင်လိင်တူချစ်သူမှန်လျှင်နေပါစေ,ဇီဝ,သို့မဟုတ်တန်ဖိုးမဲ့,ဤဂိမ်းများကိုသင်ရလိမ့်မယ်. သင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊
ကိုယ့်အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ကဲ့သို့ရှာဖွေနေဇာတ်ကောင်တပ်ဆင်ထားကြောင်းကာတွန်းလိင်ဂိမ်းရုပ်ပြောင်များစွာသောရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူကြွလာ. သင်မိသားစုကောင်လေးကိုချစ်လျှင်,သင်တို့သည်ဧကန်အမှန်ကျွန်တော်စီးရီးနှင့်အတူရှိရုပ်ပြောင်ဂိမ်းခစျြလိမျ့မညျ'ချစ်ရာသခင်သည်ဇာတ်ကောင်။ သားတွေရဲ့မဖွယ်မရာဇာတ်လမ်းတွေထဲသူတို့မိခင်တွေကိုထိပါးရင်သင်လည်းနှစ်သက်မှာပါ။
အကြောင်းကဒီကစားနည်းရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်စက်ကွင်းဖြစ်ပြီးသူ့သားခရစ်စတီယန်ဆိုတဲ့မူလဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ဝင်ပူးခံရလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ဒီအားလုံးမဟုတ်ပါ. ခရစ်စ်လစ်ပ်လိုက်ပို့တဲ့အချိန်မှာပဲဒယ်ဒီဟာသူ့သမီးတွေကိုကိုယ်ဝန်ရသွားတယ်။
သင်သည်သူတို့၏မိခင်များကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့ကာတွန်းဇာတ်ကောင်နှင့်အတူမိနျးမပိုပုံပြင်များချင်တယ်ဆိုရင်,အမေရိကန်အဖေများအတွက်ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းရှိပါတယ်. ဒီဂိမ်းထဲမှာမူလတန်းဇာတ်ကောင်စတိဗ်စမစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဖခင်,လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်တစ်ဦး,အရှေ့ဥရောပတစ်မစ်ရှင်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်,စတိဗ်သူ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်သူမ၏ပျော်ရွှင်စေရန်မိမိအမေရဲ့မွေးနေ့ကိုတက်ပြသထားတယ်။
ဒီအစုလိုက်အပြုံလိုက်သွားလာနေတဲ့ဂိမ်းတွေကိုပူကောင်နာမည်ပြောင်ပါဖောမန့်တွေထဲကလူကြိုက်အများဆုံးအရုပ်ဆိုင်တချို့ယုတ်ညံ့တဲ့နည်းတွေနဲ့ပေါင်းတယ်။ ဤဆောင်းပါးအတိုအားပိုမိုပြီးပြည့်စုံစေရန်ဆက်လက်ရေးသားဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။ဝီကီဟုခေါ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်ပုံစံတစ်မျိုးကိုအသုံးပြု၍ပူးပေါင်းရေးသားခြင်းကိုအဆင်ပြေစေရန်စီမံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါေပမယ့္အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ဇာတ္လမ္းေတြ၊ဂိမ္းမ်ားစြာပါတဲ့မူလကစားနည္းဂိမ္းေတြလည္းပါဝင္ပါတယ္။ ထိုအရူးကြီးကြပ်ရမကောင်းဆိုးဝါးဆန့်ကျင်မှော်စာလုံးပေါင်းကိုသုံးရန်ရှိသည်သောသူပူအဓိကဇာတ်ကောင်နှင့်အတူများစွာသောခွေးရှိပါတယ်။
မိသားစုမတားမြစ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွေနဲ့လာနေတဲ့ဒီအစုအဝေးထဲမှာလိင်မဖွယ်မရာကစားနည်းတွေလည်းရှိတယ်။ အားကစားပွဲအများစုမှာလီလီမိန်းကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဒေသခံတွေ၊ ထိုရဟန်းတို့သည်ထိုရဟန်းတို့၏မဖွယ်မရာပြုခြင်းကိုခံကြရကုန်၏၊ထိုရဟန်းတို့၏မဖွယ်မရာပြုခြင်းကိုခံကြရကုန်၏၊ထိုရဟန်းတို့၏မဖွယ်မရာပြုခြင်းကိုခံကြရကုန်၏။
ကျနော်တို့ကိုပူဇော်ကြောင်းအမာခံညစ်ညမ်းဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းသာလတ်ဆတ်တဲ့ဂိမ်းထီ5 နည်းပညာနှင့်အတူကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားဂိမ်းအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့အံ့သြဖွယ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးဂိမ်းနှင့်အတူလာ. သင်ချင်တယ်မဆိုလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့ရုပ်ပုံကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါလိမ့်မည်. တကယ်တော့,သင်သည်ထိုသူတို့သင်သိမည်သူမဆိုကဲ့သို့ကြည့်ရှုစေနိုင်သည်. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုနှိပ်စက်တာရှိတယ်ဆိုပါစို့၊သူ့နာတာလေးကိုခေါ်လိုက်ရအောင်။ ကောင်းစွာ,သင်သည်ဤဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုအပေါ်ရဇာတ်ကောင်အဖြစ်သူမ၏ပြန်ဖွင်နိုင်. ဒီနောက်ကမ္ဘာအတုထဲမှာဆာရှာကိုကစားနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ဇာတ်ကောင်များနှင့်ပတ်သက်.ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာရှိပါသည်. ကိုယ့်ရုပ်ပုံကိုကိုယ်ကြိုက်အောင်ဖန်တီးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ့်ပုံစံလိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်ဂိမ်းအပေါငျးတို့သညျအခွားဇာတ်ကောင်အပေါ်ရိုက်စတင်ပါလိမ့်မည်။ သင့်အနားကိုလမ်းလျှောက်လာပြီးသင့်လမ်းလာနေတဲ့လိင်ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးတိုင်းကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မှာပါ။ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတွေကတကယ်ခံစားရတာကတော့ဆွေးနွေးမှုကိုရေးထားတဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့နည်းလမ်းကြောင့်ပါ။
ဒီအွန်လိုင်းအစုအဝေးကိုဖန်တီးတော့ဝက်ဘ်ပေါ်ကကစားသမားအားလုံးအတွက်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့လူကြီးကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးချင်တယ်၊ဘယ်ကိရိယာပဲသုံးသုံးပေါ့။ ပလက်ဖောင်းပေါ်မတင်ခင်စမ်းသပ်ထားတဲ့ပလက်ဖောင်းမဲ့ဂိမ်းတွေပဲရှိတယ်။ ဆိုလိုတာက၎င်းတို့ကိုကွန်ပျူတာ၊မက်၊အိုင်ဒီနှင့်အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများမှသင့်ဘရောက်ဇာတွင်တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဂိမ်းမျက်နှာပြင်သင်အသုံးပြုမဆိုဆုံးဖြတ်အပေါ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်အရာကိုမဆိုဒေါင်းလုပ်ချရန်မလိုအပ်ပါ။မည်သည့်တိုးချဲ့မှုကိုမဆိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျနော်တို့ပူးတွဲပါအဘယ်သူမျှမကြိုးနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောအခမဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းကိုဆက်ကပ်.
လူတိုင်းသည်ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းစုဆောင်းခြင်းအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားနည်းတွေကိုဒေးဗစ်ဒက်ဒါကသူ့ဘလော့ဂ်မှာရေးခဲ့တယ်။ နှင့်အခြားဆိုဒ်များအများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပြုကြပြီ.